Etihad Airways gbatịrị Verified ka ofufe njem akwụkwọ n'uche ụwa niile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa UAE » Etihad Airways gbatịrị Verified ka ofufe njem akwụkwọ n'uche ụwa niile
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • investments • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Ọnwụnwa izizi gosipụtara na Verified to Fly Guests hụrụ oge nhazi ha na tebụl nyocha ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara na oge nkwụsị oge maka ndị ọbịa niile belatara.
Ndị njem amaara ama na-enwe ọ trackụ na ọdụ ụgbọ elu site na raara onwe ha nye Verified to Fly desk maka ahụmịhe ngwa ngwa na nwayọ.
Amalitere na mmalite nke ọnwa June, Verified to Fly egosila na ọ na-aga nke ọma na-enyere ndị mmadụ aka ịlaghachi njem.
A na-agba ndị njem Etihad niile ume ka ha gaa na Jikwaa Akwụkwọ m iji nyefee akwụkwọ ha.
Etihad Airways agbatịwo atụmatụ akwụkwọ njem 'Verified To Fly', na-enyere ndị njem aka ịnwe nkwado maka akwụkwọ njem ha Covid-19 tupu ha erute n'ọdụ ụgbọ elu, na ụzọ ndị gafere netwọk ụwa ya.
Maka maka imirikiti Etihad Airways ụgbọ elu, iji banye na ndebanye aha ndị ọrụ Verified to Fly service site na ịga na Jikwaa Ntinye Akwụkwọ m ma soro ntuziaka ndị dị mfe iji bulite ma nyefee akwụkwọ njem ha. Ndị ọbịa ga-enweta nkwenye ozugbo enyerelarịrị akwụkwọ ha aka dịka ihe gọọmentị chọrọ ma nwee ike iji obi ike na udo nke obi gaa ọdụ ụgbọ elu ahụ, ebe ha maara na ha emezuola ihe niile dị mkpa tupu ụgbọ elu ha.
Site na usoro eji eme ihe, ndị njem a nwapụtara na-anụ ụtọ ọpụpụ ọsọ ọsọ na ọdụ ụgbọ elu site na raara onwe ha nye Verified to Fly desk maka ahụmịhe ngwa ngwa na nwayọ. Ọnwụnwa ndị mbụ gosipụtara na Verified to Fly Guests hụrụ oge nhazi ha na tebụl nyocha ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara na oge nkwụsị oge maka ndị ọbịa niile na-ebelata - na-enyere ndị njem ọsọ ọsọ ma na-enwe mmekọrịta dịpụrụ adịpụ na ọdụ ụgbọ elu.
Amalitere na mbido ọnwa Juun, Verified to Fly egosila na ọ bụ ngwa ọrụ na-aga nke ọma na-enyere ndị mmadụ aka ịlaghachi njem, na-enye ndị njem obi ike na ha nwere akwụkwọ ndị dị mkpa iji zute gọọmentị COVID metụtara njem iji kwe ka ofufe. Otu uru dị mkpa nke Etihad's Verified to Fly program bụ ndị njem na-ekerịta data ha na ụgbọ elu n'onwe ya, na-enweghị ndị ọzọ.
John Wright, Onye isi oche ụgbọ elu mba ụwa na Ọrụ Ntanetị, Etihad Airways, kwuru, sị: “Ekwuputara na Fly egosila na ndị ọbịa anyị na-ewu ewu nke ukwuu, ebe ha na-enweta ọsịsọ ngwangwa mgbe ha na-enyocha ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụrụ na iji Verified to Fly. Iwepu ọrụ ịkọwapụta site na usoro ahụ, ndị ọbịa jikwa mmesi obi ike ahụ kpọrọ ihe na mgbe ha rutere n'ọdụ ụgbọ elu, ha ezutela ihe niile chọrọ njem COVID.
“Anyị nwere ekele maka oge ndị a siri ike maka ndị njem ma nke a abụwo isi ụzọ iji mee ka njem ndị ọbịa anyị dị mfe dị ka o kwere mee.”
A na-agba ndị njem Etihad niile ume ka ha gaa na jikwaa ntinye akwụkwọ m iji nyefee akwụkwọ ha. Ozugbo ndị Verified to Fly enyochala nrubeisi ahụ, ndị ọbịa ga-enweta email 'ga-aga nke ọma' ma ọ bụrụ na akwụkwọ ha na-ezute ihe gọọmentị chọrọ. Ọ bụrụ na ihe ndị achọrọ na-efu ma ọ bụ ezuteghi, a ga-agwa ndị ọbịa ka ha weghachite ma ọ bụ lelee akwụkwọ ha.